Sida lagu Helo oo sameeyey Isticmaal Windows Live Movie in Edit Videos
> Resource > Windows > Sida lagu Helo iyo Isticmaalka Windows Live Kan sameeyey Movie
Windows Live Movie Uumahaaga editor a non-toosan video aad u awood si cad loogu talagalay istareexsan-of-isticmaalka halkii ay soo diyaariyeen balaadhan oo ah muuqaalada. Iyadoo Windows Live Movie Kan sameeyey, waxaad si fudud u abuuri karaan iyo edit filimada aad SNMna kaliya lacag la'aan ah oo ah qiimaha. Halkan waxaad ku baran doontaa sida loo helo iyo sida loo isticmaalo Windows Live Kan sameeyey Movie in Windows 7.
Qaybta 1. Sida loo helo Window Kan sameeyey Live Movie in Windows 7
Waayo, kuwa loo isticmaalo si ay u isticmaalaan, Uumahaaga Window Movie kaas oo ka mid ahaa in Windows Vista oo XP, waxay hellay iyadoo laga badiyay. Sidee iyo meesha aad ku heli karaa? Dhab ahaantii, Windows Movie Kan sameeyey ayaa lagu bedelay Windows Live Kan sameeyey Movie kaas oo si rasmi ah lagu sii daayo on August 19, 2009. Waxa aan la guraa in Window 7, si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay si ay u tagaan oo soo dejisan Live website-ka Windows, oo lacag la'aan ah.
Halkan waxaa ku qoran shuruudaha nidaamka Windows 7 Live Kan sameeyey Movie ah:
• Nidaamka Operating: Windows Vista ama Windows 7
• Xusuus: 1 GB ee RAM (2 GB ee RAM ama wax ka sareeya waxaa lagu talinayaa in marka sixiddiisa-qeexidda sare [HD] video)
• processor: 2.4 GHz (processor hal) ama ka sare (yeerto ah processor asaasiga ah ama wax ka sareeya waxaa lagu talinayaa in marka sixiddiisa HD video)
• browser Internet: Internet Explorer 7 (ama ka dib), Mozilla Firefox 3.0.1 (ama ka dib), ama Safari 3.1 (ama ka dib)
• internet: shaqeynayaan Internet u baahan dial-up ama helitaanka Internet broadband (si gooni gooni ah la bixiyo). . Eedeeyay Local ama meelaha fog laga yaabaa codsan
• Kaarka Video: Video card taageera Microsoft DirectX 9.0c (ama ka dib) iyo Pixel Shader 2.0 (ama ka dib)
• Barnaamijyada dheeraad ah: Windows Live Photo Gallery
Waxaa jira laba hab oo aad dooran kartaa in aad kala soo bixi Windows Live Kan sameeyey Movie: Xulashada A : Tag rasmiga Windows Live website ; Xulashada B : Sidoo kale waa in aad la soco in qayb Windows Live gaare Movie haatan isagoo ka mid ah Windows Live Essentials oo aad ka heli kartaa link ah gudahood Windows 7. From Start> Bilaabidda> Hel Windows Live Essentials kuugu goobta Windows Live Essentials ka meesha aad kala soo bixi kartaa Windows Live Movie Kan sameeyey oo kale Essentials Apps qaadan doonaa.
Ka dib markii Windows Live Movie Kan sameeyey rakibay on your computer, hadda ka eegi kartaa ka Windows Live Movie tutorial Kan sameeyey, iyo edit videos fudayd.
Qaybta 2. Windows Live Movie Kan sameeyey tutorial
Tallaabada 1. Tag Bilow Windows Live Windows Live Movie gaare
Tallaabada 2. Add sawir ama videos.
Under Home Tab ah, waxaad kartaa jiitaa sii jeedi sawiro iyo videos aad ka desktop, ama guji Add videos iyo button sawiro. Dooro images / video aad rabto in aad ku darto, oo guji Open. Hubi in faylasha aad waxaa taageera, waxaad heli kartaa eegno ah qaabab vide Windows Live Kan sameeyey Movie taageeray .
Waxaad ku dari kartaa music jeeda in aad movie click on dar qaybta soundtrack haddii aad rabto in aad u movie fiican. Si aad u saaro codka haatan button saar la qabsato iyo mugga music by qabsado slider Mix.
Tallaabada 3. Video tafatirka.
Waxaad si fudud u dooran kartaa hal dhibic bilowga by adiga oo isticmaaleya isticmaale Falanqeynta dooni daalacashada bar / jir ah iyo / ama thumbnail dooni bar oo guji "Calan bilaabi dhibic". Si aad u calaamadee dhamaadka clip ah, isku mid ah u soo dhaadhacay, adigoo gujinaya "Calan dhibic dhamaadka" waxa uu noqon karaa. Tan samee oo dhan clips aad storyboard, iyo filim isku dubbarida qoraalladaas. Isticmaalka function goo aad jar kartaa video tan iyo bilowgii ama qayb ka mid Dhamaystiri, iyo sidoo kale aad u xidhi karaa si gaar video dhawaaqa isticmaalaya button Aamusi.
Tallaabada 4. Ku dar kala guurka.
Waxaan si guul leh ku daray ayaa videos ama sawiro si storyboard ah, haatan aan ku darto saamaynta guurka qaar ka mid ah si aad u movie.
Tallaabada 5. naadiya aad videos oo iyaga waxaa la jiray dad badan wadaagaan.
Hadda waxa aannu si guul leh u abuuray ayaa noo filim, aynu la qaybsano saaxiibada iyo qoysaska. Waxaad gubi karaa videos ay u DVD la Windows DVD Kan sameeyey ama share in YouTube ama badbaadin sida videos for loo maqli karo.
Si aad version ah sharable aad filim, maraan si Home tab, qaybta 'Ka dhig ah filimka', waxaad ka heli doontaa labo ikhtiyaar:
a. Outputting aad filimka sida file video in uu badbaadiyey on your computer.
b. Wadaagista aad filim ay u soo bandhiga internetka si madbacad MSN Video.
Fiiro gaar ah : Haddii aad u baahan tahay gaare movie in loogu badalo karo iyo gubaan dhammaan qaabab video oo caan ah, waxaanu kugula talinaynaa Wondershare DVD Creator , kaas oo kaa caawin kara inaad badalo qaabab video kala duwan, sida AVI, MP4, MKV, TRP, MTS, M2TS, AVCHD, iwm DVD ku qasabno yar. Intaas waxaa sii dheer, waxa ay kuu ogolaanaya in aad xaalkaa videos iyo codsan DVD bedeley shakhsiga.
Download Free Wondershare DVD Creator:
Ultimate Guide ee Manager Share PC Samsung
Sida loo soo bixi Samsung AllShare Play (link) oo ku xidhmaan PC